Road traffic accidents consume 5,118 lives in Ethiopia Ethiopia has lost 5,118 lives in one year due to road traffic accident, while over ten thousand are have survived heavy and light injuries. (New Business Ethiopia) — The growing number of… Read More »
Shiftaa #Gooticha_Tolcha_Wagi_Irraa. ★★★★★★★★ Sirna fi haccucaa bulchiinsa empayeera Itoophiyaa jalaa, of baasuuf kanneen Qawwee qabatan falmaa turan hundi isaanii ፣ hoggantootafi deeggartoota isaanii biratti ” Shiftaa ” jedhaame kan maqaan itti hin moggaafamiin hin jiru. Agaarii Tulluu ^^^^^^^^^^^^^^^ Miseensa WMT… Read More »
Wayyaaneen tokko buutee tokko bakka buute, malee goomittan tokko hin jirtuu waliif birmadhaa! ========= “Hidhaan godina Booranaatti jabaate Qeerroo biyyaa baqachiise. Godina Booranaatti marsaa 3ffaa namoota hidhuutti jiran. Marsaa duraa ji’a Caamsaa,2019 keessa namoota haga 500 olii qabanii Xoollayiitti geessan.… Read More »